Kacsanaanta VR ee Daabacaada iyo Suuqgeynta | Martech Zone
Tan iyo bilowgii suuqgeynta casriga ah, magacyadu waxay fahmeen in sameynta xiriir lala yeesho isticmaaleyaasha ugu dambeeya ay xudun u tahay istiraatiijiyad suuqgeyn guul leh - abuurista wax kicin kara shucuurta ama bixiya khibrad inta badan leh dareenka ugu dambeeya.
Iyada oo suuqleyda ay sii kordhayaan xeeladaha dhijitaalka ah iyo kuwa moobaylka ah, awooddii ay ugu xirmi lahaayeen adeegsadayaasha dhammaadka qaab qoto-dheer ayaa hoos u dhacday. Si kastaba ha noqotee, ballanqaadka dhabta ah ee muuqaalka ah (VR) oo ah waayo-aragnimo qoto-dheer ayaa qarka u saaran jabitaan loogu talagalay daabacayaasha, wariyeyaasha iyo suuqleyda. Xaqiiqdii, qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu waaweyn ee ku jira warbaahinta ayaa ku dhex qulqulaya tikniyoolajiyaddan ka hor inta badan macaamiisha xitaa aysan heysanin headset-ka VR u gaar ah. In kasta oo inta badan Mareykanku aysan wali aqbalin fikradda ah sahaminta adduunyada dalwaddii, warbaahintu waxay diiradda saaraysaa waqtiga iyo dadaalka sidii loogu dari lahaa VR istiraatiijiyadooda gaarsiinta waxyaabaha mustaqbalka - waana caqli in suuqleyda ay sidaas oo kale sameeyaan.
Sababta Maaddaama daabacayaasha warbaahinta iyo suuqleyduba ay raadinayaan habka xiga ee ay uga hortegayaan macaamiishooda oo ay kula xiriiraan iyaga oo leh heer qoto dheer, maxaa ka wanaagsan meesha lagu kulmo oo lagu amro feejignaantooda marka loo eego gudaha barxad buuxda oo dhammaystiran oo laga heli karo meel kasta? Xaqiiqda dhabta ah waa jawaabta.
Laga soo bilaabo dhacdooyinka isboorti illaa maqaalka majaladda, tiknoolajiyada VR waxay diyaar u tahay inay aasaas ahaan wax ka beddesho habka macaamiisha ay ula kulmaan warbaahinta, waana kan sababta ay daabacayaasha iyo suuqleydu ugu boodayaan guddiga ka hor inta aan la qaadin tiro badan:
Xarumaha wararka sida Associated Press iyo The New York Times waxay soosaarayaan nuxurka VR oo kuxiran sheekooyin qasab ah, oo qiiro leh. Muraayadda xaqiiqda dalwaddu waxay macaamiisha u soo dhoweyneysaa ficil-celinta wadnaha ama tallaabada wadnaha-diirisa, iyadoo la siinayo waayo-aragnimo warbaahineed oo qarka u saaran filim shaleemo ah.
Suuqgeeyayaasha calaamadaha ayaa sahamin kara sida ay uga mid noqon lahaayeen sheekooyinkan, sida kafaala-qaadayaal ama qaybo ka mid ah sheekada lafteeda. Sheekooyinka shucuurta ayaa ah waxa kiciya kaqeybgalayaasha ugu sarreeya daawashada, amar ku bixinta saamiyada warbaahinta bulshada, taraafikada iyo faallooyinka qaadanaya saameynta fayraska isla markaana dadka ka dhigaysa inay soo laabtaan wax badan.
Kordhinta Mawduuca Dijital ah
Iyadoo 84 boqolkiiba dadka waaweyn ee Mareykanka ah isticmaalka internetka iyo Boqolkiiba 68 ayaa leh taleefan casri ah, waxyaabaha dijitaalka ah waxaa lagu cunaa heer aad u xun. Macaamiisha ayaa dalbanaya helitaanka waxyaabaha dhijitaalka ah daabacadduna waxay u baahan yihiin inay fuliyaan baahida macaamilku u qabo raalli ahaanshaha degdegga ah. Maaddaama dad badani ay filayaan waxyaabaha dijitaalka ah ee farahooda, waxay sidoo kale raadinayaan waxa soo socda… taas oo ah meesha ay VR ka ciyaareyso.
VR waxay uqaadaneysaa waxyaabaha dhijitaalka ah ilaa heerka xiga waxaana marka hore laqabsanaya native digital kaasoo ku koray tikniyoolajiyadda casriga ah iyo warbaahinta bulshada. Iyadoo loo marayo VR, macaamiishani waxay ku eegi karaan waxyaabaha ku jira qofka-koowaad, ka mid noqoshada ficilka iyo - xaaladaha qaarkood - inay ku lug yeeshaan nooca “doorto quudhsigaaga” nooca xaaladda.
Qiyaas hadaad "ku socon karto" sheeko oo aad ku kala doorato aragtideeda iyo xaggee ayaad u aragtaa nuxurka? VR waxay tan ka dhigeysaa mid dhab ah warbaahintuna waxay si gaar ah u daneynayaan qeybtaan ka mid ah VR, iyagoo baaraya sida loogu dabaqo warshadaha isboorti ee balaayiin doolar ku kacaya.
Taageeraha isboortiga waxaa loogu yeeraa mid xamaasad leh sabab ahaan - waa saldhig daacad ah, qiiro leh daawadayaasha si joogto ah u jaan qaada si ay u daawadaan kooxaha ay ugu jecel yihiin TV-ga iyo khadka tooska ah. Ka waran haddii taageerayaashani ay ku arki karaan ciyaarta garoonka dhexdiisa, iyagoo ka daawanaya indhaha ciyaarta marka uu dembiga galayo, iyo kuraasta ku taal safka 50-ka yar ee difaaca marka ay difaacayaan? Tikniyoolajiyadda VR-ga ah waxay u oggolaaneysaa taageerayaasha inay la kulmaan ciyaaro siyaabo aan suurta gal u ahayn telefishanka dhaqameed.
Halkii aad kala kulmi lahayd isboorti ama dhacdo kale oo warbaahin ah oo ka socota dhinacyo dhowr ah oo horay loo go'aamiyay, VR waxay u fureysaa suurtagalnimada daawadayaasha inay u habeeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin - isla sidaas oo kale xayeysiiyaasha. Khibradaha waawayn ayaa lagu dhex dari karaa dunida VR dhexdeeda, taasoo siinaysa daawadayaasha xulasho waxa ay doonayaan inay ka arkaan xayeysiistayaasha. Oomman? Iibiyaha taagan tartiib tartiib ayaa u yimaada xilliyada, oo bixiya nooc gaar ah oo cabitaan ah oo u adeegaya aragtida astaanta.
VR waxay u ciyaareysaa baahida loo qabo waqtiga dhabta ah iyo nuxurka labadaba - laba shay oo dadka u dhashey dijital ay u aqbaleen heerarka warbaahinta maanta. Dhacdooyinka tooska ah, hal-cabirka ah ayaa fursad u siinaya saddex-cabbir, khibradaha qofka ugu horreeya iyo VR ayaa hogaaminaya amarka. Daabacayaasha daabacan iyo suuqleyda ayaa ku boodi kara markabka si ay kor ugu qaadaan hirarka VR ee sii kordhaya, ama waxay halis ugu jiraan inay hoos ugu dhacaan salka badda aan dhamaadka lahayn ee heerka dhijitaalka ah ee caadiga ah.
Zeiss VR One Plus oo loogu talagalay iPhone 6 Series Zeiss VR One Plus oo loogu talagalay iPhone 7 Series
Bixinta: Wax magdhow ah nagama bixin qodobka, laakiin waxaan la wadaageynaa xiriirkeenna Amazon Affiliate Zeiss 'headset VR-ku guuleystay'.
Tags: nuxurka dhijitaalka ahnative digitalnuxurka maadadaiPhone 6iphone 7Publishingsheekoxaqiiqada dalwaddiidhageysiga dhabta ah ee dhageysigavrvr madaxavr kowvr hal headsetzeiszeiss vr mid lagu daray